Polycarbonate (PC) waxaa loo sameeyaa warqad fidsan oo loo maro habka loo yaqaan 'extrusion process'. Habka loo yaqaan 'extrusion process', polycarbonate waxaa si isdaba joog ah loogu riixayaa iyada oo loo marayo aag heerkulkiisu sarreeyo iyo cadaadis halka uu ku dhalaalay oo la isku duubay, ugu dambeyntiina lagu qasbay inuu dhinto qaab qaabaysan. PC-ga waxaa loo soo saari karaa dhumuc kala duwan: 0.25mm, 0.5mm, 0.7mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm iyo 2.0mm. Dhumucda guud ahaan la isticmaalo waa 0.5mm, 0.7mm, 0.8mm iyo 1.0mm.
PC-ga ayaa lagu qasi karaa midabbo kala duwan si loo helo muuqaal milicsiga, dhalaalka, muuqaalka indhaha iyo hufnaanta.
Extruder fur waxaa lagu dabaqi karaa texture kala duwan si ay u abuuraan sheet PC texture.
Coextrusion PC / PMMA. Filimaanta ama xaashiyaha waxay ka kooban yihiin lakabyo ka kooban laba ama in ka badan oo polymer kala duwan ah ayaa lagu soo saari karaa iyada oo la isku darayo durdurrada la shubay. Nidaamkan waxaa loo isticmaali karaa in lagu isku daro walxaha si loo helo isku dhaf ah waxyaabo aan laga heli karin hal polymer.
Vacuum sameynta PC waxay ku siin kartaa ka hortag saameyn sida dhakku u ilaaliyo maskaxda.
Vacuum sameynta PC-ga waxay noqon kartaa lakab sibidh ah si loo abuuro hawl MIPS ah si loo maareeyo tamarta saameynta wareega.
Thermoforming waa geedi socod caan ah oo loogu talagalay soosaarka koofiyada, taas oo gelineysa warqad polycarbonate midab midabkiisu yahay silkscreened oo foornada loogu talagalay preheat, iyadoo polycarbonate lagu ridayo mashiinka faaruqinta, xaashida waxaa lagu kululeeyaa heerkul la samayn karo oo la qabsan karo, oo loo sameeyay qaab gaar ah qaab caag ah, qaab kala duwan dhererkuna wuxuu sababi lahaa kala bixis kala duwan inta lagu gudajiro faaruqinta, faakiyuumka khafiifka ah ee la sameeyay PC-ga ayaa ah halista ugu badan ee midab fadeaway ama yareynta koofiyada, sidaa darteed waa muhiim in la falanqeeyo oo la doorto dhumucda xaashida polycarbonate saxda ah ee la xiriirta tayada koofiyadda iyo baaritaanka saameynta leh oo la jarjarey si loo abuuro wax soo saar la isticmaali karo.
Kahor howsha sameynta faakiyuumka, waxaan ku daboolnaa lakabka filinka ilaaliya xaashida polycarbonate kadib xoqida, filimku wuxuu ka ilaaliyaa Polycarbonate xoqida inta lagu guda jiro EPS-ka-sameynta, iyo inaan ka saarno filimka ilaaliya marka koofiyadda ugu dambeysa la isugu yimaado dhamaadka.
Kombuyuutarada PC PMMA
PC midab hufan
Muraayadda indhaha PC